Nhau - [Nyowani yechigadzirwa kuburitswa] Iyo isina waya yakangwara inoumba gasi detector inosanganisa yakawanda-gasi yekutsvaga uye vhidhiyo kuona, iine 4G kurodha basa
[Chitsva chigadzirwa kuburitswa] Iyo isina waya yakangwara inoumba gasi detector inosanganisa yakawanda-gasi yekutsvaga uye vhidhiyo kuona, iine 4G kurodha basa
Zvinoenderana nehuwandu husina kukwana, tsaona zhinji dzemoto petrochemical dzinokonzerwa nekudonha kwegesi. Kana iyo leakage ikawanikwa pamberi, njodzi dzinogona kuvanzwa dzinogona kubviswa munguva. Uye zvakare, kuyerera kwegesi kuchakonzeresawo kukuvara kwemhepo yekunze, inova inopedza nguva uye inonetsa kubata.
Kubva pane izvi, gasi detector rave chimwe chezvinhu zvinowanzoshandiswa mukugadzira maindasitiri, izvo zvinogona kuona kuwanda kwezvinhu zvine chepfu uye zvine njodzi, uye zvakare zvinogona kuona mhando dzemagasi mune zvakatipoteredza, uye kutora matanho anoenderana ekudzosa anoenderana mhedzisiro yekuonekwa.
Mumamiriro ezvinhu akajairika, michina yegasi inowana kudonha nekuona iko kukosheswa kwegesi panzvimbo dzekuisa chisimbiso zvemidziyo, asi nekuda kwezvimwe zvikonzero kana kufunga kwekuchengetedza, dzimwe nzvimbo dzekuisa mucherechedzo dzakaoma kuona. Semuenzaniso, kana nzvimbo yenzvimbo yekuisa chisimbiso iri pamusoro pekusvikwa nevaongorori, uye poindi yekuisa mucherechedzo iri munzvimbo ine njodzi, zvinhu zvakasiyana-siyana zvinodzora zvakanonotsa kufambira mberi. Panguva ino, isina waya zvine hungwaru gasi detector inodiwa!
Iyo iR119P isina waya yakangwara inoumba gasi detector (inozodaidzwa kunzi detector) inogona panguva imwe chete uye ichienderera ichiona uye kuratidza kusangana kwe methane CH4, oxygen O2, carbon monoxide CO, hydrogen sulfide H2S uye sulfur dioxide SO2. Iyo yakaunganidzwa gasi dhata uye nharaunda Dhata senge tembiricha, chinzvimbo nzvimbo, uye mhenyu odhiyo uye vhidhiyo inoiswa papuratifomu kuburikidza ne4G kutapurirana kweiyo isina waya manejimendi.
Iyo yekutarisa inotora nyowani chitarisiko dhizaini, yakanaka uye yakasimba. Iine pamusoro-muganho alarm basa, kana iyo data yakaunganidzwa yadarika muganho, chishandiso chinobva changoburitsa vibration uye kurira uye mwenje maaramu uye kurodha iyo data kupuratifomu panguva ino. Chigadzirwa chacho chinogona kukanda ruzivo rwekuongorora uye rwekuwongorora kweakawanda ma detectors, uye nekumisikidza yakawanda-inoshanda yekuongorora uye yekutarisa system chikuva chenzvimbo dzakakosha dzekushandira, uye kutsigira 256G memori makadhi ekuchengetedza pane-saiti mashandiro emavhidhiyo.
● Kuonekwa kwepamusoro-gasi: Vashandi vepa-saiti vakatakura chiridzwa vanogona kutonga kana nharaunda yakatenderedza yakachengeteka zvinoenderana neruzivo rwegasi inoratidzwa nechiridzwa, kuitira kuchengetedza hupenyu nepfuma yevashandi.
● Yakawedzera-muganho wezwi uye alamu ine mwenje: Kana chiridzwa chikaona kuti gasi rakapfuura chinopfuura chiyero, icharira pakarepo uye nechiedza alarm yekuyeuchidza vashandi vepa-saiti kuti vabude munguva.
● Gasi rekusimbisa girafu: otomatiki dhonza gasi yekukomberedza curve inoenderana neruzivo rwekutsvaga, tarisa iyo gasi yevasungwa inoshanduka munguva chaiyo, uye inopa simba dhata rekufanotaura kuitika kwenjodzi pamberi.
● 4G kutapurirana uye kumisikidza GPS: kurodha iyo yakaunganidzwa gasi data uye GPS kumisikidza kuPc, uye iyo yepamusoro nhanho inoongorora iyo iri-saiti mamiriro munguva chaiyo.
● Multi-scene application: Iyo tester ndeye IP67 isina guruva uye isina mvura, inokodzera kushanda mune dzakasiyana zviitiko zvakaoma